Mike Pompeo Oo La Kulamya Maanta Madaxda Taalibaan – Heemaal News Network
Mike Pompeo Oo La Kulamya Maanta Madaxda Taalibaan
Xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Sabtida maanta la kulmi doona gorgortamayaasha ka socda Taliban iyo dowladda Afghanistan iyadoo ay jiraan calaamado horumar ah oo ku saabsan wadahadaladooda iyadoo Mareykanku dedejinayo in ciidamadiisa kala baxo dalka Afgaanistaan.
Wasaaradda arrimaha dibedda ayaa sheegtay goor dambe oo jimcihii ah in Pompeo uu si gooni gooni ah ula kulmi doono dowladda Afghanistan iyo kooxaha wada xaajoodka Taalibaan, iayada oo kulankaasina ka dhacayo dalka Qatar.
Pompeo wuxuu sidoo kale arki doonaa hogaamiyaha Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, iyo wasiirka arimaha dibada.
Ninkan xilka kasii dagaya ayaa socdaal ku maraya todobo wadan oo kuyaala qaarada Yurub iyo bariga dhexe madaama madaxweyne Donald Trump uu mudnaanta siinayo mudooyinka dambe.
Horraantii toddobaadkan, Pentagon-ku wuxuu sheegay inuu dhawaan ka saari doono dalka Afghanistan illaa 2000 oo askari, taasoo meesha ka saaraty heshiiskii bishii Febraayo ee u dhexeeyay Washington iyo Taalibaan kaasoo lagu heshiiyey ka bixitaanka buuxda ee Mareykanka bartamaha 2021.
Trump wuxuu si isdaba joog ah ugu dhaartay inuu joojinayo “dagaalada daba dheeraaday” oo ay kaga jiraan Afgaanistaan, kan oo ahaa kii ugu dheeraa ee abid soo maray Ameerika kaasoo ka bilowday duulaan lagu doonayo in meesha looga saaro Taliban kadib weeraradii Sebtember 11, 2001.
Madaxweynaha la doortay Joe Biden, wuxuu sidoo kale ku ololeeyaa in la afjaro dagaalka Afqanistaan ​​inkasta oo falanqeeyayaashu aaminsan yihiin in uusan noqon doonin sidii aroos dhakhso leh.
Wadahadalladu waxay ka billowdeen Sebtember 12 magaalada Doha laakiin durba waxay isku dheceen khilaafaadyo ku saabsan ajandaha, qaabdhismeedka aasaasiga ah ee doodaha iyo tarjumaadaha diinta.
Wadahadalka nabada ee Doha ayaa furmay kadib markii Taliban iyo Washington ay saxiixeen heshiis bishii Febraayo, iyadoo Mareykanku ogolaaday inuu la baxo dhamaan ciidamadiisa si loogu badalo dammaanad qaad dhanka amaanka ah iyo balanqaadka Taliban inay bilaabi doonaan wadahadalada.
Sacuudiga Oo Dhaqaaq Siyaasadeed Maanta ka Bilaabay Eritrea.